My freedom: Sympathy
ဒီနေ့တနင်္ဂနွေနေ့... မနက်(၉)နာရီခွဲမှ အိပ်ယာပေါ်ကထတယ်။ ပေါင်မုန့်မ၀ယ်ထားမိတော့ စားစရာမရှိဘူး။ ကော်ဖီတစ်ခွက်ပဲ ဘေးချထားတယ်။ သက်သတ်လွတ်နေ့ဆိုတော့ နေ့လည်စာနဲ့ ညစာကို လက်ဖက်နဲ့ထမင်းပဲစားဖြစ်လိမ့်မယ်။ မနေ့ကလောလောလောလောနဲ့ပြန်လာတော့ ဘုရားပန်းကလွဲပြီး စားဖို့ဘာမှမ၀ယ်လာမိဘူး >.<
မနေ့ကအကြောင်းပြောရရင် စိတ်မောတယ်။ မနေ့က ဒီကိုခဏရောက်နေတဲ့ ကျောင်းတုန်းကသူငယ်ချင်းတစ်ယောက်နဲ့ ကန်ဒီတို့သူငယ်ချင်းတွေစုပြီး သွားတွေ့ကြတယ်။ Nando's မှာ နေ့လည်စာစားဖို့ ကန်ဒီပဲရွေးလိုက်တယ်။ ကန်ဒီကြိုက်တဲ့စားသောက်ဆိုင်တွေထဲမှာ Nando's လည်းပါတယ်။ အမှန်အတိုင်းပြောရရင် ကန်ဒီ့ပိုက်ဆံတော်တော်များများက စားတာနဲ့ ကုန်တာ(-.-')။ အဲ့ဒီသူငယ်ချင်းပြန်သွားတော့ ကျန်တဲ့သုံးယောက်သား Coffee Bean မှာ ကော်ဖီဆက်သောက်ရင်း အေးအေးဆေးဆေး အာလူးဖုတ်နေကြတယ်။
စကားပြောလို့ကောင်းတုန်းပဲ ရှိသေးတယ်။ ကန်ဒီနဲ့အရမ်းမရင်းနှီးတဲ့ ကန်ဒီ့သူငယ်ချင်းတစ်ယောက်ရဲ့အသိဆီက ဖုန်းဝင်လာတယ်။ ဘာကိစ္စများလဲဆိုပြီး ဖုန်းကိုင်လိုက်တော့ ကန်ဒီ့သူငယ်ချင်း Paracetamol (၁၈)လုံး သောက်ထားတယ်... အဲ့ဒါသူ့ဆီသွားနေတယ်လို့ပြောတော့ ကန်ဒီကလည်း ဒါဆိုအခုလာခဲ့မယ်ဆိုပြီး ချက်ချင်းထ,သွားရတာပေါ့။ မတော်လို့ တစ်ခုခုဖြစ်သွားရင် ဘယ်လိုလုပ်မလဲ? Paracetamol က တနေ့(၈)လုံးပဲ အများဆုံးသောက်ရတာ။ ကန်ဒီနဲ့တူတူထိုင်နေတဲ့ သူငယ်ချင်းဆီမှာ Charcoal ပါတယ်ဆိုတာနဲ့ အဲ့ဒါလည်း လိုရမယ်ရယူသွားတယ်။ Charcoal က ကန်ဒီတို့အစားမှားပြီး ၀မ်းလျောရင် သောက်ရတဲ့ အဆိပ်စုပ်ပေးတဲ့ဟာမျိုးလေ... တခြားဆေးတွေနဲ့တွဲသောက်ရင် အဲ့ဒီဆေးတွေရဲ့အာနိသင်ကိုလည်း လျော့ကျစေတယ်။ နည်းနည်းလေးပဲဖြစ်ဖြစ် အကူအညီဖြစ်လိုဖြစ်ငြားပေါ့...
မနေ့ကတညနေလုံး အဲ့ဒါနဲ့ အလုပ်ရှုပ်နေတယ်။ ဘာလို့များ အဲ့လောက်အများကြီးသောက်ပစ်ရတာလဲ? ကိုယ့်ကိုကိုယ်သတ်သေချင်တာလား?? WHY?!?! ကန်ဒီထင်တာတော့ အချစ်ရေးကိစ္စပဲ(-.-)။ အဲ့လောက် Serious ဖြစ်စရာလိုလို့လား (>.<)။ ကိုယ့်အမေက ကိုယ့်ကိုမွေးထားရတာ လွယ်တာမဟုတ်ဘူး။ အဲ့ဒီလူက ကိုယ့်မိဘထက် ပိုအရေးပါနေလို့လား?? ဘယ်လိုအခြေအနေမျိုးနဲ့ကြုံကြုံ ကိုယ့်ကိုကိုယ်သတ်သေဖို့တော့ မစဉ်းစားကြပါနဲ့(>.<)။ ဒါ အရမ်းပျော့ညံတဲ့လုပ်ရပ်ပဲ။ တစ်ခါလဲကျရင် တစ်ခါပြန်ထ... လဲကျတဲ့အခေါက်တိုင်းက ကိုယ့်ကိုပြန်ထတတ်အောင် သင်ပေးလိမ့်မယ်။
ပြီးခဲ့တဲ့အပတ်က "Maleficent" သွားကြည့်တယ်။ အရမ်းကြိုက်တယ်။ မကြည့်ရသေးတဲ့လူတွေ သွားကြည့်သင့်တယ်နော်။ Maleficent က မင်းသမီးလေးကို အဲ့လိုကျိန်ခဲ့တာ သူကိုယ်တိုင်က အချစ်စစ်ဆိုတာ တကယ်မရှိဘူးလို့ ယုံကြည်ခဲ့လို့ပဲ။ ကန်ဒီ့လိုပေါ့ ဟဟ(xD)... ရှိကောင်းရှိမယ် အရမ်းရှားပါတယ်။
ဒီတပတ်ပုံဆွဲဖြစ်တယ်။ Soft pastel နဲ့ပဲ... ဆွဲပြီးရင် လက်တွေအရမ်းညစ်ပတ်တယ်။ နောက်ပြီး ကိုယ်ဆွဲထားတဲ့အတိုင်းမနေဘူး။ အရောင်တွေကို နည်းနည်းလေးတွန်းမိတာနဲ့ ညစ်ပတ်ပြီး ပျံ့ကုန်ရော... ဆွဲပြီးရင် ဖြန်းတဲ့ဟာနဲ့ဖြန်းမှ သူ့အတိုင်းနေမှာတဲ့... ကန်ဒီ့မှာအဲ့ဒီဖြန်းတဲ့ဆေးမရှိဘူး :(
ဒီရက်ပိုင်း Facebook ကြည့်ရတာ စိတ်မချမ်းသာဘူး။ ကန်ဒီ ဒီမှာပြောရင် ကန်ဒီ့ကို ၀ိုင်းမုန်းကြဦးမယ်။ လူတွေဟာ ရှုံ့ချပြစ်တင်ဖို့ဆိုတာ အရမ်းလွယ်တာပဲ။ အလကားရလို့များလား?? ကိုယ်သေချာသိတဲ့ကိစ္စလည်း မဟုတ်ဘူး။ သူများ Personal ကိစ္စ၊ ကိုယ်နဲ့လည်း မဆိုင်ဘူး... အနေသာကြီး။ အဲ့ဒါကို တည့်တည့်တစ်မျိုး၊ သွယ်ဝိုက်ပြီးတစ်ဖုံ စတေးတပ်တွေ ရေးကြတာ ရေးကြတာဆိုတာ ကန်ဒီကလိုက်ဖတ်ပြီး သူတို့ ဒီလိုတွေရေးနေတာ "ငါသာ ဒီကောင်မလေးနေရာမှာဆိုရင်..." ဆိုတဲ့ အတွေးမျိုးရှိကြရဲ့လားလို့ စဉ်းစားမိတယ်။ ဒီလိုစတေးတပ်တွေရေးလို့ ဘယ်သူအကျိုးရှိလဲဆို ဘယ်သူမှအကျိုးမရှိဘူး။ သူတပါးထိခိုက်ပြီး စိတ်မကောင်းဖြစ်ရတာပဲ ရှိတယ်။ ကန်ဒီတို့ဟာ ရင့်ကျက်သင့်တဲ့ အသက်အရွယ်ပိုင်းကို ရောက်နေကြပြီဆိုတာ မမေ့နဲ့နော်။
ကန်ဒီလက်ဝှေ့တွေဘာတွေ ကြည့်လေ့ကြည့်ထ မရှိဘူး။ အဲ့လို ထိုးတဲ့ကျိတ်တဲ့ ပြိုင်ပွဲမျိုးတွေကိုလည်း သိပ်သဘောမကျဘူး။ ဒါပေမယ့် ဒီနေ့မနက် သူငယ်ချင်းတစ်ယောက်ရှယ်ထားတဲ့ (၁)မိနစ်တည်းနဲ့ မြန်မာနိုင်သွားတဲ့ လက်ဝှေ့ပြိုင်ပွဲလေးတော့ ဖွင့်ကြည့်မိတယ် (အဲ့ဒါလက်ဝှေ့ခေါ်တာမလား??)။ ကိုယ့်နိုင်ငံအတွက် ဂုဏ်ယူတယ်။ သူပြိုင်ပွဲမ၀င်ခင် ပြောသွားတဲ့စကားလေးကို အရမ်းသဘောကျတယ်။
"The motivation for this fight is to put Myanmar on the map. To put my people on the map. I'm willing to die in the cage to win this fight."
Well Done and Awesome :D
Paracetamol's antidote is N-acetyl cysteine, hope she's now hospitalized and her liver function won't get worse. Even if the patients survive from paracetamol overdose, some of them have to live with liver impairment for the rest of their lives.
ပါရာစီတမော့ ၁၈ လုံး :O
ကျနော်သာဆို ၁၆ ထပ်က ခုန်ချမှာ..
အာ့မှ မသေခင် အတောင်ပံလေးဖြန့်ပီး စိတ်ကူးယဉ်လို့ ဖီလင်ရှိသေးတယ် ^_^
facebook status တွေ အကြောင်းကတော့ လက်ရှောင်တယ် ကန်ဒီလေးရေ.... ကဲ့ရဲ့ တတ်တဲ့ စိတ်တွေ အရမ်းများလာသလိုပဲနော်...